2022 Amazon Hot Sale Silicone Faucet Faucet Mat ho an-dakozia Sink
Ny tsihy silicone faucet anay dia manondraka rano mandeha ho azy manodidina ny faucet ao amin'ny lakandrano, mitazona ny tampon-tranonao ho maina sy fanadiovana. Izany dia tena namaha ny olan'ny rano be loatra manodidina ny lafiny ao amin'ny lakozia sy ny efitra fandroana.
Anaran'ny vokatra: Silicone Faucet Mat ho an-dakozia Sink
Habe: 14.6*5.6 santimetatra
Anaran'ny marika: Afaka customized
OEM/ODM: tonga soa
Ampifanaraho amin'ny lovia baolina gilasy kely silikônina
Ity lovia baolina gilasy Silicone ity dia vita amin'ny akora sakafo kalitao avo lenta.BPA tsy misy fofona, tsy misy poizina.Azo antoka sy mateza. Mora ny mamoaka ranomandry izy ireo, Atsipazo tsotra izao ny fitoeran-dranomandry.Apetraho ambony ambany ny lovia dia hanana gilasy boribory tsara ianao!
Anaran'ny vokatra: MIni Silicone Ice Ball Tray
Habe: 21.6*12.5*7.6 sm
Fitaovana: Silicone & PP
Ampiasao: Mpanao gilasy baolina
OEM&ODM: tonga soa
Fampiofanana alika Lovager Outdoor Walking Pet Custom Packages Pouch Silicone Dog Treat Bag
Ity kitapo fitsaboana alika silicone tsy misy rano ity dia zavatra tsara ho an'ny fampiofanana alika rehefa mivoaka sy mihantona.Ity kitapo fitahirizana sakafo ho an'ny alika ity dia azo apetaka amin'ny tady na ny andilanao, feno sakafo alika, mampiofana ny alikanao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, ary avelao ny alika hihaino anao.
TSARA HO AN'NY EFA KELY: Ny fanamboarana silikônika malefaka sy malefaka dia mamela an'ity tsihy mihodinkodina na miforitra kely ity, tonga lafatra amin'ny fitahirizana eny amin'ny toerana mirindra toy ny vatasarihana lakozia, trano fonenana, RV, na lasy.
Brush Kitchen Bathroom Cleaning Brush Silicone Lovia Fanasan-damba fonon-tanana fonon-tanana fikarakarana biby fiompy miaraka amin'ny Sponge Scrubber
Fampiasana maro: Ity fonon-tanana majika ity dia azo ampiasaina amin'ny lakozia, fanasana vilia, fanadiovana voankazo sy legioma, fanadiovana ny efitra fandroana, fanadiovana ny efitrano fandriana, fanesorana vovoka amin'ny akanjo, fikarakarana volom-biby, fanasana fiara sns.
Mahatohitra hafanana avo: manana fanoherana hafanana hatramin'ny 160 degre Celsius ka azo diovina amin'ny rano mangotraka na lafaoro microwave (2min).Azo ampiasaina hamindra vilia mafana na hanesorana ny lovia lafaoro.
Ny Pop it Bag dia vita amin'ny akora vita amin'ny silikônika kalitao avo lenta ara-tontolo iainana, azo antoka, ara-tontolo iainana, salama ary tsy misy fofona. ampiasaina koa ho toy ny kitapo fitahirizana entana, kitapo kosmetika, ary kitapo vola madinika.
Raha tianao ny manao karazan-tsakafo rehetra ao an-trano izay hanome fahafaham-po ny ankizy sy ny vavanao, toy ny sôkôla, ny zava-mamy ary ny mofomamy, dia tsy maintsy ananana ny lasitra silicone misy endrika maro be. ny ankizy dia traikefa mahafinaritra sy tsara mifamatotra izay hankafizin'ny rehetra.
Varotra menaka silikôna mafana borosy BBQ fitaovana saosy silikon borosy miaraka amin'ny tanany mangarahara
Ny borosy menaka silicone dia malaza amin'ny tsena any ivelany ho toy ny tapa-tavoahangy mahasoa kokoa ho an'ny fanosihosena menaka sy ny vokatra mamy, satria nahatratra ny fepetra takiana amin'ny fampiasana sakafo amin'ny lafiny fampisehoana, ary misy ihany koa amin'ny resaka famokarana sy fanodinana mba hihaona amin'ireo karazan-tsakafo samihafa. filàna fitiliana sy fanamarinana, borosy silicone kalitao dia mbola tena zava-dehibe ho an'ny fiainana an-trano.
Ny tsihy fanaova-mofo dia vita amin'ny silicone kilasy sakafo, manao ny mofomamy amin'ity tsihy ity, dia hamonjy asa be dia be ianao ary hiala voly.Ny silicone pastry tsihy dia azo antoka, mateza, endrika tsara tarehy & kalitao Premium.Ity tsihy fanaova silicone ity dia mahatanty ny mari-pana avy amin'ny -30 ka hatramin'ny 480 ° F. Ankoatra izany, ny tsihy fametahana dia misy faritra tsy miraikitra, mety amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny koba mipetaka ary tsy dia mikiakiaka.
Ny Popit Shoulder Bag dia lamaody sy malaza, ity kitapo fidget messenger ity dia tsy mahafinaritra fotsiny, fa afaka mitazona zavatra maro tsy maintsy mivoaka, toy ny finday, taratasy fidiovana, sofina, lakile ary lokomena, mitondra azy eny an-dalana, avo dia avo ny tahan'ny fiverenana.
Anaran'ny vokatra: Fidget Bag Soroka
Habe: 13.5*18.5*3 sm
endri-javatra: Tsy tantera-drano; mateza
Vidin'ny singa: 3.1-3.4 USD